Sary mikraoskaopy tsy mampino: Miara-dalana ny siansa sy ny zavakanto | Famoronana an-tserasera
Sary mikraoskaopy tsy mampino: Miara-miasa ny siansa sy ny zavakanto
Manova ny fahitantsika an'izao tontolo izao ny refy. Manaitra ny mahita endrika tsy misy endrika ao ambadiky ny zavatra hitantsika rehetra. Raha misy milaza aminao fa toradroa ny sira amin'ny voalohany dia mety ho gaga ianao, sa tsy izany? Toy izany koa ny ankamaroan'ny zavatra manodidina antsika. Raha manapa-kevitra ny hanatona ny microworld isika dia mahita ny fahatapahana tsy ho ela, ny fanaparitahana ny tena zava-misy marina ho lasa sombina sy endrika tsotra izay mivadika ho sombin-javatra tsotra kokoa. Siansa tanteraka izany, fa ahoana kosa raha manapa-kevitra ny hanao ny tsy mety maty an'ity refin'ny tontolontsika ity isika? Mety ho lasa kanto ve izy io ary hilaza amintsika zavatra avy amin'ny fanadihadiana ampitahaina sy ara-tsiansa? Ny mazava dia hitarika antsika hanana taratra tsy maintsy atao izy io ary hanaitra ny fahalianan'ny olona rehetra mahita ireo sary mikraoskaopy ireo.
Manaraka izany dia avelako ianao ohatra vitsivitsy amin'ity karazana sary ity. Azoko antoka fa ho hitanao fa manome aingam-panahy izaitsizy tokoa izany ary hanery anao tsy ho ela hijerena sy hamerina hijery ny tontolontsika amin'ny fomba fijery vaovao sy hafa.
Niakatra in-150 ny sira
Nihoatra in-30 ny penina
Niakatra in-50 ny siramamy fotsy.
Nylon dia nitombo in-50.
Peppercorn nitombo in-15.
Nihalehibe in-5.000 ny dipoavatra mainty.
Niakatra 750 heny ny kafe tany.
Nitombo 150 heny ny hazo.
Lahatsoratra vita pirinty amin'ny taratasy ary nohalehibeazina 10.000 heny.
Nihalehibe in-200 ny lamba.
Nitombo in-400 ny vovobony.
Nitombo in-10.000 XNUMX ny sisin'ny fikosoham-bary.
Nisondrotra in-500 ny volom-borona.
Nitombo 50 heny ny volo nanapaka.
Ny haavon'ny vola madinika varahina taloha dia nitombo in-5.000 XNUMX.
Nihalehibe in-3.000 ny lalitra voankazo.
Lamba landihazo nohalehibeazina in-40.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary mikraoskaopy tsy mampino: Miara-miasa ny siansa sy ny zavakanto
Octo II dia sary sokitra kinetika noforonin'i Anthony Howe izay mihetsika amin'ny rivotra